Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1364
Kedu ihe m na-eme adịghị mma? M ebudatara ma ụgbọelu ma ọmarịcha ebe maka P3D V4 ma jiri ndị ntinye gụnyere tinye ya na V4.4. N'okwu niile m enyochala ya ka etinyere ya P3D V4. Agbalịrị m ma ịhapụ ndị nrụnye ka ha gaa na-akpaghị aka, na-arụtụ aka onye nrụnye P3D ndekọ. Emechara nrụnye, ngwaahịa ndị ahụ adịghị P3D, ha anaghị egosi na Addit! Ọrụ Ọ bụrụ na m ewere oge na nsogbu iji aka wụnye ha n'ime P3D folda, ihe niile dị mma. Nkem P3D folda mmemme dị na:
"F: \_ Mmemme Ihe Mmemme Lockheed Martin \_Prepar3D v4 "
Ndị fọdụrụ nke P3D folda dị na C:
Nke a bụ faịlụ 2 iji nwalee:
mt_adams_and_mt_st__helens.exe - installer 9.74
sikorsky_s76a_spirit.exe - nhazi 9.85
Enwere m Addit ugbu a! Pro v8.6.1 ma gbalịa iji ya dị ka ihe nchedo, ma ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na nwụnye faịlụ .exe.
Ndumodu ikpe azu: site rgp1942. Ihe kpatara ya: typo ziri ezi
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 4 ọnwa gara aga #1370
Can nwere ike igosi m na ihe nrụnye ahụ detụrụ faịlị ndị ahụ n'ime "F: \_ faịlụ Mmemme \_ Lockheed Martin \_Prepar3D v4 "na abughi" C: \_ Mmemme Ihe Mmemme Lockheed Martin \_Prepar3D v4 "
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 3 ọnwa gara aga #1381
Ị deba aha ngwaahịa gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ nwere ike ịbụ na enweghi ike na ihe ị nwere ike ibudata. M na-alụ ọgụ otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ndị nweere onwe ha, ị nweghị ngwaọrụ niile iji egwu egwu. Ndị na-akwụ ụgwọ ga-enweta mgbịrịgba na mkpịrịsị niile.
Ndumodu ikpe azu: site jumpseat pilot.
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 2 ọnwa gara aga #1391
Enwere m otu nsogbu ahụ. Ọ dịghị ihe na-arụ ọrụ maka P3D v4.
Ana m ahapụ Rikooo.
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 2 ọnwa gara aga #1392
You nwere ike ịkarị karịa, biko? Nwụnye anaghị arụ ọrụ dịka nke rgp1942 ma ọ bụ na nbudatala ụfọdụ add-ons ndị dakọtara Prepar3D v4? Ọ bụ nsogbu abụọ dị iche.
Maka ozi, ndepụta nke Prepa3D v4 add-ondakọtara bụ ebe a: www.rikoooo.com/prepar3d-v4
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 2 ọnwa gara aga #1393
Ọ bụrụ na gị Prepar3D v4 dị na F: \_ faịlụ Mmemme \_ Lockheed Martin \_Prepar3D v4 wee hota ihe ntinye omenala ma pinye aka na ntughari nke ahuru wee họrọ uzo F: \_ Ihe mmemme faịlụ Lockheed Martin \_Prepar3D v4 dị ka folda ebe njedebe. O kwesịrị ịrụ ọrụ n’enweghị nsogbu.
Otú ọ dị, i kwesịghị inwe folda F: \_ Ihe Omume faịlụ na F: na ụkpụrụ "faịlụ mmemme" bụ maka C: / mbanye ma echere m na nke ahụ bụ ihe na-akpata mgbagwoju anya nke installer, M ga-ahụ ma enwere m ike dozie na n'ọdịnihu dị nso.
Ndumodu ikpe azu: site rikoooo.
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 2 ọnwa gara aga #1394
Ihe omume ahụ kwesiri ka dakọtara -ATR 72.
Ọ bụrụ na m ahapụ ya na akpaka, ọ na-etinye na C: ụgbọala.
Tozọ nke m P3D bụ F: \_Prepar3D v4.
Ọbụna na omenala kwadoro ma na-atụ aka n'ebe a, ọ naghị arụ ọrụ.
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 2 ọnwa gara aga #1395
Taa, emelitewo m onye na-enyocha ATR 72 na ATR42 biko weghachite ọzọ, ugbu a ọ ga-arụ ọrụ.
Ndị ọzọ niile add-ons maka Prepar3D v4 ga-emelite n'ime ụbọchị 3 na-esote. Daalụ
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 2 ọnwa gara aga #1397
Enwere m okwukwe na Rikooo!
Enweela ya ugbu a ma yie ka ọ na-arụ ọrụ zuru oke ugbu a.
Ndị na-ebido anaghị arụ ọrụ na V4.4 1 afọ 2 ọnwa gara aga #1404
All add-one depụtara ebe a: www.rikoooo.com/prepar3d-v4 emelitere iji dozie esemokwu ahụ na nhazi.
Oge ike page: 0.438 sekọnd